Beyle: Waxaanu u baahanahay $41 milyan si loo daabaco lacag cusub oo shillin Soomaali ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBeyle: Waxaanu u baahanahay $41 milyan si loo daabaco lacag cusub oo shillin Soomaali ah
Wasiirka Maaliyada Soomaaliya Cabdirixmaan Ducaale Beyle oo saxaafada kula hadlayay Muqdisho maanta oo Axad ah. [Xigashada Sawirka: SONNA]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka Maaliyada Soomaaliya ayaa sheegay in dhawaan si dhaqso ah loo daabici doono lacag shillin Soomaali ah.
Shir saxaafadeed maanta oo Axad ah uu ku qabtay magaalada Muqdisho, Cabdirixmaan Ducaale Beyle ayaa shegay in kharashka lacagta lagu daabici doono uu dhanyahay $41 milyan oo dollarka Mareykanka ah.
Beyle ayaa sheegay in kharashka lacag daabicista ku baxaysa aysan Soomaaliya heyn balse ay dadaal ugu jiraan halka laga keeni lahaa.
August 21, 2019 Wasiirka maaliyada Soomaaliya oo sheegay in kharashka daabacaada uu hortaaganyahay lacagta cusub ee dalka
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed iyo Xasan Shiikh Maxamuud ayaa lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyaga oo ku sii jeeday magaalada ay fatahaaduhu ku dhufteen ee Beledweyne. Diyaarada qaadi lahayd [...]